Sida loo hagaagsan iPhone la Mac aan laga badinin Wax
Sida loo hagaagsan iPhone la Mac
Waxaan iibsaday ah MacBook Pro cusub. Sidee baan u hagaagsan aan iPhone si Mac cusub? Markii aan sidaas u sameeyo sidii wixii aan inta badan sameeyo, waxaa ii sheego waxa ay masixi aan iPhone. Fadlan ii caawin.
Waxaa dhacaya oo dhan markii ugu markii users iibsaday Mac cusub oo isku day in aad u hagaagsan iPhone cusub Mac, fariin ka Lugood soo booda, isagoo sheegay inay masixi doonaa iPhone. Tani waa sida Lugood shaqeeyaa. Waxaa masixi doono xog ku saabsan iPhone oo iyaga ka buuxisaan data cusub ka iPhone. Xaaladdan oo kale, waa in aad raacdo 2 qaybood hoose si aad u hagaagsan aad iPhone la Mac. Haddii aad hesho iPhone cusub oo isku day in aad u hagaagsan oo aad Mac, kaliya u gudub Qeybta 3.
Qaybta 1. U dhaqaaq Lugood Library ka Old Computer si ay u New Mac
Qaybta 2. Music dhaqaaq / Videos / Photos ka iPhone in New Mac
Qaybta 3. nidaameed iPhone la Mac
Haddii aad qabto Mac brand-cusub ah, si ay u hagaagsan aad iPhone la Mac cusub annagoo aan innaba wax laga badiyay, in aad marka hore waa ka computer hore u guuraan Lugood Library cusub aad Mac. Waa kuwan tallaabooyinku:
Tallaabada 1. In la isku raaciyo Lugood Media File on PC Windows
Fur Library Lugood ku computer waaweyn. Haddii aad isticmaasho PC Windows ah, guji Lugood Edit menu oo la xusho aad rabtid . Haddii aad isticmaalayso Mac ah, guji Lugood menu oo la xusho aad rabtid . Ka dibna riix Advanced . Laga soo bilaabo halkan, hubi fursadaha: Ka dhig folder Lugood Media abaabulan iyo files Copy in Lugood Media folder markii isagoo intaa ku daray in maktabaddu iyo riix OK . Ka dibna riix Lugood File menu> Library > Abaabulaan Library . In la abaabulo sanduuqa wadahadal Library, hubi raaciyo files iyo riix OK .
Tallaabada 2. Nuqul Lugood Library Media Folder si Mac
Waxa aad qaadataa doono arrin Tim dheer si loo adkeeyo aad Lugood Library haddii aad leedahay boqolaal heeso maktabadda. Ka dib waa in aad nuqul folder Media ee lagu drive dibadda adag. Halkee Folder Media yahay? Xusuusnow Lugood rabtid suuqa kala tallaabada 1. Waxaad ka arki kartaa meesha Media Folder halkan. Hubi drive dibadda adag ayaa meel ku filan folder Warbaahinta. Markaas abuurtaan Lugood on cusub Mac, guji Edit menu oo la xusho aad rabtid . Riix Advanced tab si aad u aragto meesha Media Lugood Maktabadda Folder aad Mac yahay. Ka dib markii ogayn, nuqul oo halkan paste hore Lugood Library Media Folder aad drive dibadda adag.
Fiiro gaar ah: Haddii aad ku daray heesaha ama faylasha kale si Lugood aad Mac, waa in aad ku milmaan ka folder laba warbaahinta u Lugood. Haddii kale, waxaa laga yaabaa inaad lumiso files ka Lugood Library.
Haddii aad qabto killers song songs, videos ama sawiro oo kaliya ay jiraan on your iPhone, laakiin ma aha in aad Lugood Library ama Mac, waa in aad marka hore iyagu marka hore nuqul ka iPhone in aad Mac ama Lugood Library. Haddii kale, ka dib markii syncing aad iPhone aad Mac, waxaad iyaga weligood lumin doonaa. Si aad u wareejin files warbaahinta ka iPhone in aad Mac, raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Download iyo rakibi Wondershare TunesGo (Mac) on your computer. Markaas xiriiriyaan iPhone aad Mac via cable USB ah. Marka iPhone waxa lagu ogaan karaa Wondershare TunesGo (Mac), waxaa ka muuqan doona in uu furmo suuqa ugu weyn.
Tallaabada 2. Transfer Media Faylal ay ka iPhone si Mac
Laga soo bilaabo dariishaddii TunesGo (Mac), waxaad si fudud u nuqul ka kartaa music iyo playlists ka iPhone in aad Lugood Library si toos ah. Oo waa inaad sidoo kale ku wareejin karaa songs selectes, videos, iyo sawiro ka iPhone in aad Mac u gurmad aad.
Guud ahaan, aad u hagaagsan karaa iPhone la Mac via cable USB ah ama iyada oo Wi-Fi. Dooro mid aad u baahan tahay.
Nidaameed iPhone la Mac via cable USB ah
Tallaabada 1. Lugood Launch iyo xiriiriyaan iPhone aad Mac. Riix Lugood View menu dooro Show galeeysid .
Tallaabada 2. Riix si aad iPhone hoos AALADAHA galeeysid bidix. Ka dibna dhanka midig, waxaad ka arki kartaa Apps, Music, Movies, TV muujinaysaa, Books, Photos, iyo in ka badan isha. Riix tab kasta siday u kala horreeyaan. Ka dibna waxaad arki kartaa nidaameed doorasho. Waxaa Hubi si aad u hagaagsan files ka Lugood Library in aad iPhone.
Nidaameed iPhone la Mac iyada oo Wi-Fi
Haddii aadan jeceshahay in aad u hagaagsan iPhone la Mac via cable USB mar kasta, oo aad samayn kartaa iyadoo lagu dabaqaayo syncing Wi-Fi. Laakiin ka hor inta la isticmaalayo, waa in aad qotomisay Lugood hore.
Tallaabada 1. Fur Lugood aad ku Mac. Markii ugu horeysay, waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad iPhone aad Mac via cable USB ah. Guji View > Show galeeysid .
Tallaabada 2. Riix si aad iPhone galeeysid bidix. Ka dibna waxaad arki kartaa Kooban suuqa kala dhankiisa midigta. In ka Options deegaanka, hubi Sycn la iPhone taliya Wi-Fi .
Ka dib dejinta this, mar kasta oo aad computer iyo iPhone yihiin shabakad isku mid ah, adiga oo iPhone muuqan doona Lugood si toos ah. Iyo syncing bilaabmin dhaxeeya iPhone iyo Mac si toos ah.
Dhoofinta Video ka iPhone si Mac
Bedelka Songs ka iPhone si Mac
Nidaameed iPhone Xiriirada inay Mac
Dhaqaaq iPhone Photos si Mac
Jailbreak iPhone 4s adigoo isticmaalaya Evasi0n 7
Wondershare Transfer iPhone Waxaad u
Content Nuqul ka Android inay iPhone
Stuff ka iPhone dhaqaaq Android
Xiriirada kala iibsiga ka iPhone si iPhone
> Resource > Mac > Sida loo hagaagsan iPhone si Mac aan laga badinin Wax